Ahịa Ahịa Ahịa Ahịa maka Ahia Ọ bụla Nwere | Martech Zone
Ahịa ahia bu aha enyere ngwanrọ ngwanrọ emere maka ngalaba ahia na ndi otu iji mee ka usoro di mfe site na iji aka emegharia oru. Otu n'ime ọrụ ndị ahụ bụ ikike ịchọpụta onye ọbịa na saịtị gị, weghara ozi ha, ma mepee usoro nkwukọrịta na-aga n'ihu na ha… rụzuru site na iji obere akụrụngwa ma ọ bụ enweghị ego.
Dị ka Otu Aberdeen, ụlọ ọrụ ndị na-etinye usoro azụmaahịa azụmaahịa:
Nwee ọnụego ntụgharị 107% ka mma.
Nwere 40% nke ka ukwuu buru ibu.
Nwee 20% otu kachasị elu karịa nweta oke.
Nweta 17% kachasị mma amụma ziri ezi.
Ruo ugbu a, mmejuputa ngwa ahịa na-eweta ihe siri ike ma ọ bụ dị oke ọnụ maka ụlọ ọrụ na-enweghị mmejuputa. Nke a na-agbanwe. Act-On bụ ụdị ọhụrụ nke sọftụwia akpaaka ngwanrọ wuru iji mejuputa obere ụlọ ọrụ. Na ịnye ọnụahịa ahụ bụ ~ $ 500 kwa ọnwa (na-enweghị ogologo oge contracts)… ọ bụ nakwa incredibly oké ọnụ iji mejuputa a keukwu ngwọta.
Iji nwee ihe ịga nke ọma taa, ndị na-ere ahịa kwesịrị ịmaliteghachi usoro ha bụ isi site na ịba ụba nke ihe na-eduga n'ịkụkọta ọnụ na ire ahịa iji nweta ego ha ga enweta, ”ka Raghu Raghavan, onye nchoputa na CEO nke Act-On na-akọ. “Act-On Nchikota nke mfe ma ike na-enye na-efu njikọ na ahịa n'etiti disparate mgbe ngwọta dị ka email na web nchịkọta nyiwe, na overly mgbagwoju anya na-agba ahịa akpaaka nyiwe.
Software Act-On nwere ọtụtụ nhọrọ ọgaranya… niile dị site na otu ikpo okwu:
Ahịa Email na njikwa ndepụta na mgbasa ozi ịre ahịa
Mpempe akwụkwọ na ibe ọdịda
Njikọ ọdịnaya nke ụlọ ọrụ
Nlekọta ndị nleta weebụsaịtị
Webinar na ihe omume (site na ijikọ na WebEx)
Mmekọrịta CRM (ya na njikọta ahịa Salesforce na-enweghị ntụpọ)
Ngwa ahia na mgbasa ozi na-ele anya
Na-atụ anya profaịlụ, nkewa, iru eru, isi na nyocha
Na-aga n'ihu na-enyekwa gị onye njikwa nkwado raara onwe ya nye na-akwụghị ụgwọ ọ bụla! Nke a bụkarị nsogbu maka ndị na-ere ahịa akpaaka ndị ọzọ. Mmekọrịta siri ike nke Act-On Webex, Jigsaw na Salesforce nwere ike inye gị ahịa mgbalị na a zuru ezu ụzọ - si atụmanya, na ọdịda peeji nke, na ngosi, na nurturing, na-eduga ọgbọ, na-emechi… enweghị mgbe na-enweghị na-ahapụ software. Nke ahụ bụ usoro siri ike.
Tags: Auditing ikaelekọta mmadụ ibe edokọbara
Mee 23, 2011 na 1: 00 PM
Ndewo Douglas, olee otu ị ga-esi jiri Act-On tụnyere HubSpot? Ọ bụ azịza SAAS ka ịchọrọ ịwụnye ya na sava weebụ gị? Ọ bụrụ na ọ bụ SAAS, echiche ọ bụla gbasara ọrụ ndị ahịa?
Ezi echiche, John McTigue
Mee 23, 2011 na 3: 19 PM
Nke a siri ezigbo ike karịa Hubspot. Anaghị m eche nke Hubspot dị ka a ahịa akpaaka n'elu ikpo okwu dị ka ihe na-inbound ahịa ngwa. Enwere m ike ịpụ - mana echeghị m CRM, mkpọsa mkpọsa, wdg. Bụ akụkụ nke ngwa Hubspot.
Mee 23, 2011 na 3: 27 PM
HubSpot nwere ndu nurturing (drip) ma duru idozi API na Salesforce na CRM ndi ozo, ntinye akwukwo na njikarịcha, ngwa SEO (agbanyeghị nke ochie), CMS maka websaịtị na blọọgụ ejikọtara. Nke ahụ dị ka ezigbo ụlọ ọrụ na-ere ahịa na-ere ahịa. Ha nwere ụlọ ahịa e-mail.
Nke kacha mma, John
Mee 23, 2011 na 9: 43 PM
Amaara m ngwaọrụ abụọ ahụ; n'ezie na-agbadata n'ihe ị na-achọ ime - bụ isi na-elekwasị anya na inbound, mgbe ahụ, hubspot nwere ike ịba uru ileba anya, ma ọ bụ na opekata mpe ebe nrụọrụ weebụ ha 'n'efu'; ọ bụrụ na e lekwasịrị anya na inweta ihe ịga nke ọma na ma mkpọsa na ọpụpụ na / inbound ma mee ka ọ dị mfe ijikwa mkpọsa na ngwa gị niile ọnụ - dịka webex, salesforce.com, jigsaw na ndị ọzọ, mgbe ahụ Act-on ma eleghị anya ọ ka mma. Karịsịa nyere ka ọ dị mfe Act-On bụ ịmalite / iji ma lekwasị anya na nnapụta email.
Mee 27, 2011 na 6: 03 AM
Ọgbọ nke ngwanrọ ma ọ bụ usoro ahia, Kedu ka m si mara na m na-enweta uru kachasị mma nke ngwanrọ / usoro.
Mee 27, 2011 na 4: 34 PM
Jun 1, 2011 na 3:57 AM
Nke a bụ otu n’ime nnukwu blọọgụ m gụrụ taa. Ebe nrụọrụ gị nwere ọtụtụ ozi dị mma ma ejiri m n'aka na ọtụtụ mmadụ ga-enwe mmasị na ya dịka m na-eme. Ọ ga-amasị m inye saịtị a mkpịsị aka elu. Jide ezigbo ọrụ ụmụ okorobịa. Echere m na m ga-abịaghachi na saịtị a mgbe niile. Daalụ.